Abshir Bukhaari iyo Jeneraal Qeybdiid oo ku guuleystay kuraasta Galmudug ee Aqalka Sare – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Abshir Bukhaari iyo Jeneraal Qeybdiid oo ku guuleystay kuraasta Galmudug ee Aqalka Sare
Waxaa weli magaalada Cadaado ee xarunta gobolka Galgaduud ka soconaaya doorashada ee musharixiinta ku loolamayso 8-da kursi ee uu maamulkaasi ka helay kuraasta Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Abshir Maxamed Axmed (Bukhaari) oo ka mid ah musharixiinta ku loolamaysa 8-da kursi ee Aqalka Sare ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee ku guuleysta kuraasta Aqalka Sare ay Galmudug ku yeelan doonto baarlamaanka cusub ee Soomaaliya
Musharax Abshir Bukhaari ayaa helay 48-cod, waxaana sida la sheegay uu musharaxaan kasoo jeedaa beesha Saleebaan/Habargidir, wuxuunka kursiga kula tartamaayay laba musharax kale oo lagu kala magacaabo Axmed Cabdi Qoor Qoor iyo Kamaal Guutaale.
Labada musharax kale ee kala ahaa Cabdi Qoor Qoor ayaa helay 23 cod, halka musharaxa seddaxaad oo lagu magacaabo Kamaal Guutaale uu isna helay 16 cod, waxaana sidaasi kursiga ugu guuleystay Abshir Bukhaari oo 48-cod kaga guuleystay labadaasi musharax.
Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Jeneraal Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid ayaa isagana noqday shaqsiga ku guuleystay kursiga beesha Sacad/Habargidir, kadib markii uu tanaasul sameeyay Maxamed Xuseen Tahliil oo ahaa musharixii isaga la tartamayay.
Waxaa haatan magaalada Cadaado weli socota cod-bixinta tartankaasi, iyadoona saacadaha soo socdo la heli doonno natiijadda doorasho ee musharixiinta kale ee ku tartameeysa doorashadaas.
Wixii warkaan kusoo kordha kala soco halkaan Insha Allaah